05/04/2018 - Page 3 sur 4 -
Ampitatafika : Bus scolaire handeha haka mpianatra no tra-doza
Nisehoana lozam-pifamoivoizana nateraky ny samy fiara sprinter indray teny Ampitatafika, afaka kely ny zandarimaria hihazo ny Digue omaly tokony ho tamin’ny 06 ora maraina, ka isan’ny niharan-doza tamin’izany ny “bus scolaire” handeha haka mpianatra any …Tohiny
Solombavambahoaka mpanohitra : Mitory tsy misy porofo
Efa teren’ireo solombavambahoaka mpanohitra izay niezaka mafy nanakorontana, ary nanao izay fara heriny tsy ahafahana mifidy ny lalàm-pifidianana, ny filazana fa nisy ny kolikoly teny amin’ ny Antenimieram-pirenena antony nahazoana ireo maro an’isa. Raha toa …Tohiny
Fitazonana ny vidim-bary : Mila jerena akaiky ireo mpanelanelana
Na efa miakatra aza ny vary vaky ambiaty amin’izao fotoana izao, dia mbola tsy marin-toerana ny vidiny eny amin’ny mpanjifa fa miaka-midina. Manoloana ny vidim-bary eto amintsika amin’izao fotoana izao dia nambaran’ny mpiaro ny zon’ny …Tohiny
Andoharanofotsy : Notrobaran’ny olon-dratsy tsy fantatra ny fitombenan’ilay sarimbavy
Nitrangana herisetra miaro habibiana indray teny Andoharanofotsy, tapa-bolana lasa izay no nitrangan’izany raha ny fampitam-baovao, izay voalaza fa toerana iray fanaovan-danonana eny an-toerana no niantombohan’ny trangan-javatra. Mahatsiravina ary tena mampivarahontsana noho izany ity zava-niseho ity, …Tohiny
Faritra iray manan-tantara eto an-drenivohitra ny Akamasoa eny Andralanitra. Nitsidika fanindroany ity toerana ity indray ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly ary nitondra fanohanana sy fanampiana ho an’ireo vahoaka manodidina ny 25000 monina eny. Tao anatin’ny ...Tohiny